Wafdi ka socda GMDQ oo jowhar u tegay furitaanka xafiis goboleedka guddiga ee Hirshabeelle – GMDQ
Wafdi ka socda GMDQ oo jowhar u tegay furitaanka xafiis goboleedka guddiga ee Hirshabeelle
Taariikhda 14-17 Febraayo 2019 waxaa magaalada Jowhar ee Dowlad Goboleedka Hirshabeele gaarey xubno ka mid ah Guddiga oo kala ah, Khadiijo Cosoble Cali, Xuseen Cabdi Aadan iyo Maxmed Dahir Maxamud. Guddiga ayaa u tagey Magaalada Jowhar in laga furo xafiis goboleedka Guddiga ee Hirshabelle iyo shaqaaleynta hawl-wadeennadii ka shaqeyn lahaa xafiiskaas.
Waxaa ku soo dhaweeyey Guddiga Magaalada Jowhar madaxda maamul goboleedka Hirshabeele, waxayna uga warbixiyeen xubnaha Guddiga ujeedkooda shaqo iyo inay wada shaqeyn kala yeeshaan hirgelinta xafiiska Guddiga iyo shaqaaleynta hawl-wadeennada Hirshabeele.
Taariikhdu markey ahayd 15-16ka Febraayo ayaa Guddiga wuxuu imtixaan ka qaadey dadkii soo codsadey booska shaqaalonnimo ee xafiiska Jowhar iyada oo ay ku guuleysteen afar boos afar qof oo midi haween tahay.
Hirshabeelle waxay noqoneysaa Dowlad Goboleedkii sedaxaad ee uu guddigu xafiis ka furo. Waxay horey xafiisyo uga fureen dowlad goboleedyada kala ah Puntland & Koonfurgalbeed. Waxaa sidoo kale xafiis goboleedyo laga furi doonaa labada dowlad goboleed ee hartay oo kala ah Galmudug iyo Jubbaland.
Furitaanka xafiis goboleedyada guddiga ayaa qeyb ka ah hiigsiga qabashada doorashada 2020 ee qof iyo cod.
Waxaa la faafiyey February 20, 2019